Israa'iil oo qalabkii wax lagu baarayay ka qaadaysa Qudus - BBC News Somali
Ciidammada ammaanka ee Israa'iil ayaa xalay bilaabay inay qaadaan qalabka wax lagu baaro
Israa'iil ayaa waxa ay meesha ka saaraysaa qalabka lagu baaro hubka iyo biraha wax lagu dilo ee ay gaysay aagga barakaysan ee maagaalada Qudus, iyadoo taa badelkeedana isticmaali doonta qaab midkaasi ka fudud.
Golaha ammaanka ee Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa goor sii horreysay oo Talaadadii ah u codeeyay in qalabkaasi meesha laga qaado.
Xiisad ayaa cirka isku shareertay kaddib markii 14-kii July laba askari oo ka tirsan booliska Israa'iil lagu dilay Xaram al-Shariif halkaas oo Yuhuuduna ay u taqaan Temple Mount.
Mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in qalabkaasi wax lagu baaro loo baahan yahay sababtoo ah bay yiraahdeen raggii hubaysnaa ee weerrarka gaystay hub ayey gudaha masjidka la soo galeen, hasayeeshee go'aankaasi waxa uu kiciyay mudaharaadyo.
Jimcihii la soo dhaafay, saddex Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay iskudhacyo dhexmaray ciidammada ammaanka ee Israa'iil iyo dad dibadbaxayay, xilli kumannaan qof ay isugu soo baxeen Bariga magaalada Qudus iyo Daanta Galbeed ee la haysto.